Hevitra 3 avy amin'ny Xiaomi Smart Home sy maro hafa! ZigBee, Bluetooth ary WiFi - SmartMe
Hevitra 3 avy amin'ny trano Xiaomi sy ny maro hafa! ZigBee, Bluetooth ary WiFi
1 Aogositra 2020
Aqar, Bluetooth, Wifi, xiaomi, xiaomi trano, zigbee
Afaka manana trano Smart Smart ny rehetra. Io no hevitra ao ambadiky ny SmartMe ary hifikitra amin'izany isika. Na izany aza, manomboka amin'ny fotoana sasany ny rehetra dia mila mahita ny atao hoe Zigbee, nahoana ny Wifi dia manan-danja amin'ny fitaovana ary mikasika ny vavahady bluetooth rehetra izy rehetra. Ao amin'ity torolàlana ity dia hianatra ny hevitra fototra telo avy amin'ny tontolon'ny Xiaomi Home ianao.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratana volana vitsivitsy lasa izay, saingy nanapa-kevitra izany izahay Refresh. Ny fon'ny ekipia Xiaomi Home ecosystem dia ny fampiharana Mi Home. Io no ahafahanao manampy fitaovana hafa ary manangana ny tranonao hendry amin'ny fototra. Ny zavatra iray lehibe tsy maintsy hadino foana ny resaka momba ny faritra. Azonao atao ny mividy fitaovana sy sensor sensor avy any amin'ny faritr'i Sina na ny faritr'i Eropa. Raha tsy misy fampiharana efa nohavaozina na kofehy dia tsy hampiditra azy ireo ao anatin'ny rindran-trano tokana ianao. Ka mila mametraka tsara ny faritra ianao. Efa nosoratanay momba izany ny momba an'io Torolalana.
Ahitàna fampahalalana ilaina momba ny vokatra Xiaomi Home
Raha vao manana rindranasa voalamina tsara isika ary esory ao anaty boaty ny fitaovana, dia maniry izahay ny hampiasa azy io. Ny fitambaran'ny vokatra rehetra dia tokony hanome tokantrano mora azy amin'ny alàlan'ny fampiasana sensor izay mandefa fampahalalana. Ary hametraka tsara ny fitaovanao ary ho faly, dia ilaina ny mahafantatra izay sokajy latsaka anisany.
Ireo fitaovana ireo dia tsy mamela ny hanamboarana ireo seho. Fanampin'izay, afaka mifandray amin'izy ireo ihany izahay rehefa akaiky izahay. Ohatra iray amin'izany fitaovana izany dia ny.g. ny kettle Xiaomi.
Vavahady Bluetooth - Ity vavahady ity dia ahafahantsika mifehy lavitra ny fitaovana bluetooth. Noho izany, mampitombo be dia be ny fahafaha-manao azo ampiana amin'ny trano an-tsaina io. Ohatra amin'ny tanjona toy izany ny Jiro LED Philips - Xiaomi, izay iray amin'ireo fitaovana ilaina betsaka noho ny hahafahanao mankafy ny fampandehanana ny asa isan'andro, miverimberina.
BLE - Angovo ambany Bluetooth. Teknolojia Bluetooth vaovao ity izay tsy mandany angovo firy. Misaotra an'io fa ny fitaovana Bluetooth dia mety maharitra ela kokoa amin'ny bateria tokana.
Ny fitaovana malaza indrindra. Miampita amin'ilay router ny fitaovana ary noho izany dia azonay miditra amin'ny toerana rehetra izy ireo. Aza hadino fa ny sakana rehetra, e.g. rindrina, hanakana ny famantarana. Ny fitaovana dia tsy maintsy manana fidirana tsara ny routerizay ahafahan'ny famindrana angon-drakitra tsy misy fetra
Raha marefo ny volonao dia mila mandinika izany signal amplifieriza no haharitra ho anao?
Zigbee dia mamela ny serasera amin'ny vidin'ny angovo mora indrindra. Miasa amin'ny endriny roa ireo fitaovana: miasa ny bateria ary mipetaka mivantana any amin'ny socket. Ny fitaovan'ny bateria tokana dia tokony haharitra roa taona farafahakeliny ary fepetra takiana amin'ny fahazoan-dàlana ZigBee izany.
Raha te hifandray amin'ny tontolo ivelany dia mila vavahady ny fitaovana. Misaotra an'izany fa ny ampahany lehibe amin'ny fifandraisana dia tsy mavesatra ny tamba-jotra. Voamarina daholo ny fifandraisana satria tsy maintsy ampiarahina amin'ilay vavahady aloha ilay fitaovana.
Ireo fitaovana zigbee dia afaka miasa amin'ny halavirana lavitra. Ny fitaovana tsirairay izay kirihinao amin'ny socket dia miasa toy ny amplifier. Azontsika atao aza ny manamboatra andalana 5 fitaovana izay hanamafisana be ny famantarana.
Ny tombony amin'ny ZigBee dia eo ihany koa ny fidirana amin'ny data. Saika tsy misy fahatarana intsony eto aminay. Noho io antony io, misy hafa ampiasaina amin-katsahana ho toy ny sensor sensor, izay misy fotoana lehibe.
Ny fitaovana Zigbee dia latsaka amin'ny karazana fitaovana telo:
vavahady Ny andraikiny dia ny mandrindra ny asan'ny fitaovana hafa. Io no ampifandraisin'ny fitaovana hafa ary manangona vaovao izy. Matetika ny vavahady dia misy fetra amin'ny isan'ny fitaovana azo ampiarahina amin'izy ireo - fitaovana 16, 32 na 64 aza!
Ny fanamafisana dia fitaovana ZigBee izay namboarintsika tamin'ny sakantsakana. Tsarovy anefa fa tokony hiaraka amin'ny conducteur N izany! Mety ho jiro, jiro na fanovana rindrina izany. Ny mari-pamantarana dia azo itarina hatramin'ny fitaovana 5 farany, ka raha manana fitaovana farany isika, e.g. 20 metatra avy eo amin'ny vavahady, tsy hahita izany ilay vavahady. Fa misaotra ny amplifiers dia afaka mahatratra izany.
Ny fitaovana faran'ny bateria dia mandeha. Matetika ireo sensor. mihetsika, tondraka rano, setroka, switch switch. Ireo fitaovana rehetra ireo dia mifandray mivantana amin'ny vavahady ary manome vaovao momba ny toe-piainan'izy ireo sy ny fandrefesana azy ireo amin'izao fotoana izao. Mandry matory ny fitaovana mba hihazona hery, fa mifoha amin'ny millisecond.
Tsy Xiaomi ihany no Xiaomi
Tsy Xiaomi irery no mpanamboatra ny vokariny rehetra. Ity dia lohahevitra iray ho an'ny fidirana hafa, saingy tsara ny mahafantatra fa mivarotra fitaovana amin'ny mpamokatra samihafa i Xiaomi. Ny iraisan'izy ireo dia ny fampidirana amin'ny rindranasa Mi Home. Misaotra an'io fa afaka mampifandray ireo fitaovana amin'izany ianao, ankoatry ny hafa avy any Roborock, Yeelight, Smartmi, Viomi, Aqara ary mpanamboatra maro hafa. Nanomana lisitr'izy ireo feno izahay tamin'ny andian-dahatsoratra hafa - Fizarana 1, Fizarana 2.
Apple HomeKit, Home Assistant, hevitra, Fandraisana Xiaomi
Aqara Magic Cube - famerenana koba Xiaomi
Aqar, Aqara majika koba, xiaomi
Afaka ny ho singa manan-danja amin'ny Smart Home ve ny koba kely tsy mitongilana? Misaotra ny Aqara Magic Cube, nahita aho eny. Saingy tandremo! Mila manana hevitra manokana momba izany ianao. Vakio ny valiny Aqara Magic Cube. Aqara Magic Cube dia ...
Mazava ho azy, mpanamboatra maro hafa izay amidy Xiaomi nefa tsy mampiditra ary manana ny fangatahan'izy ireo manokana. Toy izany tamin'ny fakantsary Yi tsy hifandray amin'ny Mi Home ianao.
Amin'izany fampahalalana izany dia efa manana fahalalana fototra ianao momba ny karazana fitaovana maranitra trano. Ankehitriny, tsy misy hafa azo andramana! Smart Home dia zavatra tena lehibe ary tena manoro azy amin'ny olon-drehetra izahay.
Xiaomi Home - trano manan-tsaina dia an-tranonao
Ny hevitry ny trano manan-tsaina dia ny hampifanaraka ny habaka voafantina amin'ny filan'ny tsirairay ilain'ny mpampiasa. Raha tsorina dia ny Xiaomi Smart Home dia andiana vahaolana mifandray, namboarina izay nokendrena indrindra ho fanasoavana anao sy ny olon-tianao na vahiny.
Amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny fitaovana manaraka, ny fametrahana ny fiasan'izy ireo amin'ny haavon'ny fampiharana, ny fananganana ny laharam-pananana manokana anao, dia tsapanao ny maha-zava-dehibe ny maha-manokana anao. Tsy mihoatra ireo, mety tsy ilaina, gadget izay mamolavola fomba hampiasana azy ireo, fa tsy hamela ny hihoatra ny paikady fampiharana. Mifanohitra amin'izay - mifototra amin'ny fampahalalana niditra, ny sensor na izay fitaovana Xiaomi Smart hafa dia miasa araka izay irinao, mazava ho azy, ao amin'ireo safidy azonao.
Noho ny fanampian'ny vokatra toy ny Smart Motion Sensor (na sensor hafa maro hafa) dia afaka mampiasa an-tserasera sy tsy nampoizina ny haavon'ny fiarovana ianao. Mahatsapa ny fiononana izay mandeha ho azy ny fitaovana maro ary tsy misy ny fandraisanao anjara. Noho ny fampiharana ilaina, dia nametrahanao ny fampahalalana rehetra sy ny fiasa ilainao sy hahaliana anao, ary ny ambiny dia asan'ny fampitaovana fitaovana. Ireo tsindrona Smart Sensor Set dia manokatra ny lisitry ny vahaolana ampolon'ny sonia Xiaomi na miara-miasa amin'ny rafitra Xiaomi Smart Home.
Rehefa manomana ny tranony mahira-tsaina isika, ny zava-dehibe indrindra dia ny mamaritra ny filantsika. Avy eo isika dia manontany tena amin'ny tenantsika - inona no azontsika atao automate ao anatin'io karazana haitao io? Afaka manomboka mampiasa fitaovana amin'ny mpanamboatra iray isika, avy eo mora kokoa ...
Ato amin'ity lahatsoratra ity, ianao mianatra ny foto-kevitra telo fototra izay fototry ny trano hendry, ka "bluetooth", "wi-fi" ary "zigbee". Izy ity dia karazana fanasana amin'ny izao tontolo izao izay ampitomboin'ny teknolojia ny fampiononana ny fiainanao, ahafahanao mitahiry angovo sy fotoana sarobidy, manohana ny fiarovana ny fananana ary fahatsapana fiarovana ankapobeny. Ary ny tsara indrindra - tsy misy lisitra ny vidiny, ny safidy tsara, tsy misy fifandraisana masiaka.
Arakaraka ny fisokafan'ny rafitra no tsara kokoa. Amin'ny fampidirana fitaovana sy fametrahana vokatra bebe kokoa dia mahita tombony bebe kokoa amin'ny trano manan-tsaina ianao. Satria ny trano marani-tsaina dia trano marani-tsaina, izay ny fomba fandaharanao azy, alaivo mandeha ho azy, ahitsy.